Waxaa jira Ton qiime u leh B2B ee Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Douglas Karr
Xogta degdegga ah ee B2B ee Bulshada:
83% shirkadaha B2B hada soo dhig baraha bulshada!
77% shirkadaha B2B waxay filayaan kordhinta waqtiga aad qaadatay ku saabsan arrimaha bulshada sanadka soo socda.
35% shirkadaha B2B hada iska qor kormeerka baraha bulshada madal.
Aniga suuq ahaan B2B, naftayda, marwalba waan layaabayaa in shirkadaha suuqgeyntu ay arkaan B2B oo ka dambeeya B2B Warbaahinta bulshada ayaa udub dhexaad u ahayd aasaaskeenna iyo koritaankeenna sannadihii la soo dhaafay. Waxaan haynaa wax soo socda oo la yaab leh oo ku saabsan Twitter, isdhexgal dhexdhexaad ah oo ku saabsan qoraallada Facebook-ga, bartilmaameedka cajiibka ah ee qoraallada Facebook ee la bixiyo, iyo sii wadista dareenka LinkedIn.
Warbaahinta bulshada ayaa ina siisa dhowr fursadood:
Isdhexgalka dhagaystayaashayada si cadee wararka iyo fursadaha in wax laga qoro.
La socodka baraha bulshada si loo helo oo loo daweeyo nuxurka weyn ee dhagaystayaasheena.
La socodka baraha bulshada sheegid iyo dhiirrigelin ku saabsan waxyaabahayaga.
Dhiirrigelinta waxyaabahayaga - mid dabiici ah iyo mid la bixiyayba.
Saameyn wax ku ool ah fursadaha is dhexgalka, wadaagida iyo kor u qaadida midba midka kale.
Iyo, si aan toos ahayn, kor u qaadista noocyadeena iyo adeegyadeena iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada ugu dambeyntii waxay naga caawineysaa inaan si wanaagsan ugu sarreynno warbaahinta bulshada marka loo eego ereyada ay dhagaystayaasheena ku dhiirrigelinayaan inta ay joogaan webka. Fursaduhu waa, haddii aadan ku jirin warbaahinta bulshada oo aad tahay qof iibiya B2B ama suuqgeyn - qofka kula tartamaya ayaa cunaya qadadaada. Waxaan kugula talin lahaa dhowr waxyaalood si aad u bilowdo:
Si otomaatig ah u daabac boggagaaga wuxuu ku dhejiyaa xisaabaadkaaga Twitter, Facebook iyo LinkedIn.
Ku biir Kooxaha Facebook iyo LinkedIn khaas u ah warshadahaaga si aad u bilowdo kaqeybgalka shabakadaha la xiriira halkaasoo rajo laga heli karo.
Ka bilow raac hoggaamiyeyaasha warshadaha iyo la wadaaga waxyaabaha ay ka kooban yihiin dhagaystayaashaada si ay ula xiriiraan iyaga.
Ugu dambeyntii, martiqaad si aad u qorto boostada martida, kaqeybgal wareysiga podcast, webinar, ama xitaa kaliya tweetup.
Himiladaada ugu dambeysa waa inay kordhisaa labadaba gaadhista shabakaddaada iyo awoodda aad ku leedahay shabakaddaas. Markii laguu aqoonsado inaad tahay ilo lagu kalsoon yahay, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa gaari doona inay kula ganacsadaan. Ku abuur qiime adoo ka caawinaya, ee ha u iibin iyaga, in kastoo!
Tags: b2bsuuqgeynta b2bb2b suuqgeynta warbaahinta bulshada